Madaxweyne Xasan oo Warqadaha Aqoonsiga ka Guddoomay Danjiraha Denmark (SAWIRRO) |
Madaxweyne Xasan oo Warqadaha Aqoonsiga ka Guddoomay Danjiraha Denmark (SAWIRRO)
buy tadalafil, generic lioresal. Madaxweynaha Somalia, Xasan Sh. Maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada Somalia ee Muqdisho kaga gudoomay warqadihii aqoonsiga safiirnimo danjiraha cusub ee boqortooyada Denmark ee Soomaaliya, Ms Mette Knudsen
Xasan Sheekh ayaa safiiradda cusub ee Denmark uga warbixiyay horumarka ay Somalia ka gaartay dhinacyada amniga, siyaasadda iyo barnaamijyada Hiigsiga sannadka 2016-ka iyo weliba doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sannadkaas.
Sidoo kale, madaxweyne Xasan ayaa boqortooyada Denmark uga mahad-celiyey doorka ay ka qaadaneyso horumarinta iyo dib u dhiska Somalia ka socda, taasoo dalku kaga gudbayo sannadihii fowdada.
Dhanka kale, safiiradda Denmark Mette Knudsen oo iyana hadal ay jeedisay ku sheegtay in dowladda Denmark ay sii wadayso taageerada ay siiso Soomaaliya, iyadoo soo dhaweysay horumarka dhinacyada kala duwan ee ay sameeyay xukuumadda Somalia.
Ugu dambeyn, munaasabadda ayaa waxaa goob-joog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda Somalia, C/salaan Hadliye Cumar iyo la-taliyaha madaxweyne Xasan, Dr Aweys Xaaji.